LASA ny roa taona, ary mbola ao an-tranomaizina ihany i Josefa. Tsy nahatsiaro azy ilay mpitondra kapoaka. Indray andro àry dia nanana nofy roa niavaka i Farao, ary nanontany tena ny amin’ny hevitr’izany izy. Hitanao ve izy eto matory? Ny ampitso maraina dia nampiantsoin’i Farao ny olon-kendriny ary nolazainy azy ireo zavatra nonofisiny. Nefa tsy afaka nanambara taminy ny hevitry ny nofiny izy ireo.
Mba tsaroan’ilay mpitondra kapoaka ihany i Josefa tamin’ny farany. Hoy izy tamin’i Farao: ‘Fony aho tao an-tranomaizina dia nisy lehilahy afaka nanambara ny hevitry ny nofy tao.’ Nampanalain’i Farao avy tao an-tranomaizina avy hatrany i Josefa. Nambaran’i Farao tamin’i Josefa ny nofiny: ‘Nahita ombivavy fito matavy sy tsara tarehy aho. Avy eo dia nahita ombivavy fito tena mahia sy ratsy tarehy aho. Ary ny ombivavy fito mahia dia nitelina an’ireo matavy.’
‘Tao amin’ny nofiko faharoa dia nahita salohim-bary fito vokatra sy masaka naniry tamin’ny tahony iray aho. Avy eo dia nahita salohim-bary fito malazo sy maivam-boa aho. Dia nanomboka nitelina ny salohim-bary fito tsara ny salohim-bary malazo.’
Hoy i Josefa tamin’i Farao: ‘Zavatra iray ihany ny hevitry ny nofy roa. Ny ombivavy fito matavy sy ny salohim-bary fito vokatra dia fito taona, ary ny ombivavy fito mahia sy ny salohim-bary fito malazo dia fito taona hafa koa. Hisy fito taona hanirian’ny sakafo be dia be eto Ejipta. Avy eo dia hisy fito taona izay tsy hanirian’ny sakafo afa-tsy kely dia kely.’
Hoy àry i Josefa tamin’i Farao: ‘Mifidiana lehilahy hendry iray ary ampiandraiketo ny fanangonana sakafo izy mandritra ny fito taona tsara. Dia tsy ho mosarena ny vahoaka mandritra ny fito taona ratsy manaraka rehefa ho sakafo kely dia kely no haniny.’
Nankasitrahan’i Farao ilay hevitra. Ary dia nifidy an’i Josefa izy mba hanangona ny sakafo sy hitahiry azy. Tonga ny olona nalaza indrindra tany Ejipta i Josefa, nanarakaraka an’i Farao.
Hizara Hizara Ireo Nofin’i Farao
my tant. 23